Espaina: Mahazo Tombony Ny Banky, Maty Antoka Ny Vahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2012 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Ελληνικά, Svenska, Español
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Eoraopa anaty krizy ity lahatsoratra ity.
Ny orinasa mpanao fandalinana Oliver Wyman, izay mandalina ny hamafin'ny fototra (na na ny tsy fisian'izany) ho an'ireo banky lehibe espaniôla, dia namoaka ho fantatry ny rehetra ny famintinana avy aminy: mila 50.000 tapitrisa Euro ireo banky mba hialàn-dry zareo ao anatin'izao toerana mananosarotra nametrahan'ny fihibohan'ny asa fanorenan-trano sy ny haratsiam-pitantanana azy izao.
Fa dia fomba ahoana loatra no nahatonga ireo banky ho amin'izao toerana misy azy izao? Ny fanazavàna dia azo takarina amin'ny hoe ny bolongam-bola tanaty vinavina dia tsy maintsy hozaraina amin'ny BFA/Bankia (26.400 tapitrisa euros), Catalunya Caixa (7.800 tapitrisa ), Novacaixagalicia (6.400 tapitrisa ) ary ny Banco de Valencia (3.000 tapitrisa ).
Ireo banky ireo sy ireo toerana fitehirizam-bola tafiditra anatin'ity raharaha manahirana amin'izao fotoana ity dia ireo notantanan'ny mpanao politika fahiny, izay nampiasa azy ireny, tsy hoe fotsiny hametrahana ny namana sy havana [es] izay mampisalasala ihany ny fahaiza-manaony amin'ny toerana ambony maha-mpanapa-kevitra nasiana azy aminà karama midangana be, nefa koa natao toy ny banky fitoeran-tahiry manokan'ny tena mba ho famatsiana izao karazana tetikasa goavambe mampahatahotra rehetra izao [es].
Araka ny lazain'i José Mata [es] ao amin'ny Twitter hoe:
Hetsi-panoherana tao Madrid ny faha-25 hatramin'ny 29 Septambra. Sary avy amin'ny pejy Facebook n-ni Redes Quinto Poder.
@JMataMata: “IZAHAY dia niaina mihotra lavitra noho izay nananaNAREO”. Fanehoan-kevitra avy amin'ny tale-politikan'ny Banky Fitehirizam-bola iray. #bailout #banks #badbank
Ny bitsik'i Anibal Fernández [es] dia ahatakàrana ny fahatsapàna ankapobeny:
‏@anibalochevi: koa satria ny olona sasany, izay lasa any anaty governemant any ny sasany, nanaotao foana, isika mianakavy (isam-batan'olona) no tsy maintsy mandray anjara amin'ny #bailout (fanavotana)? Tsy rariny izany amiko.
Ireo banky, etsy ankilany, no tomponandraikitra amin'ny fitontonganan'ny asa fanorenana noho ny famatsiany afera tany amin'ny sehatra izay nandrakofany ny firenena tamin'ny birikiny [nanomana ny làlany] (novatsiana, tetsy andaniny, tamin'ny fampindramana vola tsy voaara-maso izay natolotr'ireo banky Alemana ho azy ireo [es]). Taty aoriana, ireny banky ireny ihany no nanolotra findramam-bola mba hahafahana mivarotra ireny trano ireny. Ny hamehana handafo azy ireny sy hahazo vola haingana dia midika fa nomena olona tsy manana anton'asa azo antoka ny vola, izay hisedra fahasahiranana amin'ny amerenana ny vola mandritra ny fotoana maharitra noferan'ny fitrosàna – 20 na 30 taona, na mihoatra izany aza. Ary tsy hoe ho anà efitrano iray monja : fa natetika ny banky no nandresy lahatra ny olona mba hanitatra ny findraman'izy ireny vola hividy trano iray faharoa hatao fialàna sasatra.
Zavatra roa no vokatr'io fihetsika io: ny voalohany, tamin'ny alàlan'ny famoronana tinady azo lazaina ho tsy tena izy akory, nidangana be ny vidin-trano fonenana tany Espaina [es], nanjary ny iray amin'ireo lafo indrindra any amin'ny Fiombonambe Eoraopeana. Ny faharoa, rehefa nitsefotra ny resaka trano fonenana, hitan'ireo banky fa tafahitsoka anaty fampiasam-bola tamin'ny asa fanorenan-trano tsy misy manjifa sy any anatinà findramam-bola toa tsy ho voaverina akory ny ampahany betsaka amin'ny renivolan-dry zareo amin'izao fotoana, ireo fianakaviana izay nanao ny trano onenany ihany ho antoky ny vola nindraminy ary lasa eny an-dalambe ankehitriny rehefa nalain'ny banky ireny trano fonenana ireny.
Cristóbal Montoro, Minisitry ny Fitantanam-bola, sarin'ny Forges. Image avy ao amin'ny bilaogin'ny Izquierda Unida-Almuñécar
Ankehitriny, ireny banky ireny ihany no mitodika any amin'ny governemanta – sy amin'ny teratany Espaniôla rehetra – mba hanohana ny asa fanarenana ny fahavoazan-dry zareo. Teo anelanelan'ny 2010 sy 2011, nanolotra 11.000 tapitrisa Euro ny governemanta Espaniôla ho an'ireny banky ireny, vola izay efa natao ho toy ny very ankehitriny, izay niteraka fitomboan'ny fitontonganana araka ny nambaran'ny Minisitry ny Fitantanam-bola, Cristóbal Montoro, [es]. Amin'izao fotoana, mba hahafahany mampiditra ny vola izay ilain'ireo banky ireo, araka ny hevitry ny Oliver Wyman, mila mangataka amin'i Eoraopa i Espaina mba hamonjena ny bankiny, izay midika fa ho tomponandraikitra amin'ny famerenana ny trosa amin'ny Eoraopeana ny fanjakana ary mba hiatrehana izay trosa sy zanabola aterany, dia mila manetsika ny volam-bahoaka izay hampiasàna ampahany betsaka amin'ny tetibola 2013. Noho io antony io, nahenan'ny governemanta be tsy nisy toy izany ny vola nato ho an'ny fahasalamana, kolontsaina sy fanabeazana…
Araka ny hazavain'i Vicenç Navarro [es], mpampianatra toekarena sy siansa politika, ao amin'ny bilaogy Rebelión [es] :
Ny olon-tsotra, izay tsy manana andraikitra akory amin'ny asa fanorenana, no iray tsy maintsy handoa ny tavy vaky sy ny trosa. Toa-javatra faran'izay tsy rariny izany, satria anjaran'ny Fanjakana amin'izao no miantoka ny famerenana ny trosan'ireny banky ireny amin'ny mpanome vola azy. Ho sarotra ny hametraka rafitra iray tena tsy rariny toy izany.
Ny zavatra mendrika tokony hatao dia ny hanoneran'ireny banky ireny ny hadisoany sy hizaka ny fahavoazany. Na farafahakeliny mitady marimaritra iraisana eo amin'ny letsi-trosa amin'ny banky sy ny tompom-bola. Tsy izany anefa, hatreto, fa ireo tompom-bola – teratany na vahiny – hatrany no mivoaka mahita tombony ary tsy matiantoka velively. Ary raha tsy vitany ny manonitra samirery, dia ny olon-tsotra amin'ny ankapobeny no handoa izany amin'ny alàlan'ny fanjakana.
Io no antsoina hoe asa fanavotana ny rafitra ara-bola. Ary satria ny ampahany betsaka amin'io trosam-panjakana io dia banky vahiny no tompony (Alemana amin'ny ankapobeny), ny asa fanavotana ara-bola tahaka izany dia, tahaka izay nitranga tany Gresy, Portiogaly sy Ireland, asa fanavotana avy aminà banky Alemana (ary misy ampahany kely avy amin'ny Frantsay). Sady koa, raha toa ny banky tsy mandoa ny trosam-panjakana izay any aminy, ny fanjakana Espaniôla no handoa izany. Mariky famadihana ny fatiantoka ho resaka sosialy izany, mahatonga ny Fanjakana ho tomponandraikitra amin'ny trosan'ny banky.
Araka ny fanehoan-kevitr'i utopiacarmona [es] :
Raha atao amin'ny teny hafa, lasa ho mpiahy voalohany ny fatiantoka ara-bolan'ireo mpangoron-karena ny fanjakana Espaniôla, ary dia mampiasa ny tetika sy hevitra rehetra takatry ny sainy, hatramin'ny volantsika sy ny zontsika, mba tsy ho ny banky no ho matiantoka singanà Euro iray amin'ny vola nilokàny, ary dia izany no heverina ho dikan'ny hoe fifanakalozana ara-barotra malalaka. Malalaka, mba hamonoana antoka ny olon-tsotra mana-tsaina, malalaka, mba handresen'ny banky mandrakariva.
Ary i La Clave [es] no mamintina azy ity amin'ny teny nitsivitsy :
Fihazany ho azy ireo ny tombony fa ataony itambaram-be kosa ny fatiantoka.